Ny rainy moa no isan'ny nenjehin'ny dahalo fa tafatsoaka, niaraka tamin'ny fianakaviany, fa Elisabeth kely no tratran'ny bala ka tavela tao anaty atidohany ny bala. Tsy nahatsiaro tena intsony i Elisabeth kely tamin'ny nitondrana azy tany amin'ny hopitaly.
Nifanome tanana tamin'ny fianakaviana avokoa ny olona na ireo fikambanana isan-tokony. Nanao ny farahaizany ihany koa ireo mpitsabo, ka dia velona soa aman-tsara izao i Elisabeth kely na dia nisy takaitra mavesatra aza.
Natolotra ny Fitsarana ity andron'ny alakamisy 17 mey 2018 tokoa ireo jiolahy miisa 5 izay nandray anjara tamin'io fanafihana nandratra an'i Elisabeth kely io. Voasambotry ny Zandary izy ireo vokatry ny fiaraha-miasa amin'ny olontsotra nanome vaovao ary mbola karohina ny 15 hafa iray tarika aminy.
Hatreto dia tsy niverina any amin'ny fokontany Ambalamarina, Kaominina Andremalama, Distrikan'Isandra intsony ny fianakavian'i Elisabeth mba ho fiarovan'izy ireo aina. Mitohy arak'izany ihany ny fitsaboana etsy andaniny.